Namni kun gaafuma tokko President Oromiyaa natti fakkaatee hin beeku!!! Kichuu
HomeAfaan OromooVideosNamni kun gaafuma tokko President Oromiyaa natti fakkaatee hin beeku!!!
Gooftaa fi Ashkarri waliif ta’aaniiru,addaan isin hin baasiin,ijarraa maqaa.
Namni kun gaafuma tokko President Oromiyaa natti fakkaatee hin beeku Waldiigeessiyyu lafa haadhuudhaan maayii baasa kun Waldiigeessa hojii dhabeessadha.
Kanaafidha Koloneeltichi Awwaaldigeessa fakkaatu kana akka qodaatti ,akka garbicha dhuunfaatti itti fayyadama!!!
Qiraacii garaaf malee Lammiif hin dhikkifsanne galtuu lamaan kanaan akkam bultan yaa saba nagaa dhabee ?
Solomon Ungashe maaloo Maatii kanaaf Gofund bani . Akkuma armaan dura hojii boonsaa taasisaa turte.
Warra haqatti ciche
የአምቦ ከተማ ወጣቶች የስራ አጥነት ችግር
ሀገር በቀል ኢኮኖሚ ማሻሻያው በምሁራን እይታ